Tapered Roller Bearing၊ Deep Groove Ball Bearing၊ Pillow Block Bearing - Xinri
Auto Bearing ပါ။
Joint Bearing ပါ။
Bearing Accessories များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်များလက်၌ အရည်အသွေးပြဿနာများမရှိစေရန် အစိတ်အပိုင်းတိုင်းနှင့် bearing များကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စစ်ဆေးပြီးပါပြီ။ပိုပြီးဖတ်ပါ
7X24 နာရီ တယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှု အခမဲ့။ OEM / စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုကြိုဆိုပါသည်။
စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း ၊ အလယ်အလတ်ဈေး ကွာခြားမှုမရှိပါ။ပိုပြီးဖတ်ပါ
Linqing XINRI Precision bearing Co., Ltd. သည် tapered roller bearing၊ cylindrical roller bearing၊ deep groove ball bearing၊ pillow block bearing၊ wheel hub bearing နှင့် inch non-standard bearing ထုတ်လုပ်မှု စျေးနှုန်းများတွင် အထူးပြုထားသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင် စုစုပေါင်း ဧရိယာ စတုရန်းပေ ၂ သန်းကျော် ရှိပြီး လက်ရှိ ဝန်ထမ်း ၅၀၀ ခန့်၊ အဆင့်မြင့် သတ္တု ပြုပြင်ရေး ကိရိယာ မျိုးစုံ ယူနစ် ၃၆၀ ကျော်၊ စမ်းသပ် ကိရိယာ အလုံးရေ ၂၄၀ ကျော်၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ XRL အမှတ်တံဆိပ်အတွက် ကိုယ်စားလှယ် ရှာဖွေနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်၊ သင်သည်မည်သည့်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
XRL ကို ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း 120 ကျော်တွင် ရောင်းချနေပြီဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်ရေး၊ သတ္တုတူးဖော်ရေး၊ လေဆိပ်၊ လေအေးပေးစက်စနစ်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာများ၊ သင်္ဘောဓာတ်အားပေးဌာန၊ အရုပ်အတွက်ဖြစ်စေ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ၊ မော်တော်ကား၊ XRL သည် အလယ်အလတ်တန်းစားစျေးကွက်အပိုင်း၏ အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးထက် မနည်းလှပါ။ .
တရုတ်လက်ကားဈေး တရုတ်စက်ရုံ အရည်အသွေးကောင်း...
တရုတ်နိုင်ငံအတွက် OEM စက်ရုံ 6203 မြင့်မားသောအပူချိန်မြင့်မားသော...
China Miniature Ball Bearings စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်...
စျေးနှုန်းချိုသာသော တရုတ် Hand Spinner စက်ရုံ လက်ကား...
ထုတ်လုပ်သူ needle roller bearing
အိုးအိမ် ကြိတ်စက် cylindrical bearing
Bearing အိမ်ရာခေါင်းအုံးပိတ်ဆို့ bearing ucp 200series
XRL သည် နိုင်ငံပေါင်း 120 ကျော်ကို ရောင်းချခဲ့သည်။
နှစ်စဉ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရောင်းအားသည် ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ ကျော်ရှိသည်။
နှစ်စဉ်ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်သည် ယူနစ်သန်း ၇၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် လက်မှတ်ကို ရရှိထားပါသည်။
ဘာလဲ ငါတို့ Do
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် BEARING ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Tapered roller bearings၊ Deep groove ball bearings၊ Pillow block bearings၊ Cylindrical roller bearings၊ Spherical roller bearings၊ Wheel hub bearings နှင့် အခြားအရာများ အပါအဝင် bearings အစုံအလင်ကို ပေးဆောင်ပါသည်။ အတွင်းအချင်း 20 မီလီမီတာရှိသော သေးငယ်သောဝက်ဝံများမှ ပြင်ပအချင်း 500 မီလီမီတာရှိသော ကြီးမားသောဝက်ဝံများအထိ အတိုင်းအတာများ။ စံဝက်ဝံများအပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း စံမထားသော ဝက်ဝံများကို ထုတ်လုပ်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရုရှားနိုင်ငံ LADA၊ TZA၊ VPZ၊ SPZ၊ VBF နှင့် KG နှင့် အခြားသူများအတွက်လည်း ထုတ်လုပ်ပါသည်။ ဤအတောအတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။
1. အတုလုပ်ခြင်း၊ လှည့်ခြင်း၊ အပူကုသခြင်း၊ ကြိတ်ခွဲခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းကဲ့သို့သော ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင် ပြီးဆုံးပါသည်။ ထို့ကြောင့် XRL Bearing သည် သင့်အား အနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့် တိကျသောဘောလုံးနှင့် roller bearings တို့ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး အချိန်မီပေးပို့နိုင်ပါသည်။
2. ISO9001:2000 အသိအမှတ်ပြုထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထုတ်ကုန်ခြေရာခံနိုင်မှုစနစ်ကို တည်ထောင်ထားပါသည်။ ထို့အပြင်၊ XRL Co. တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဝံများကို အသုံးချခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းတွင် ပြဿနာအမျိုးမျိုးကို ဖြေရှင်းရန် ဂျပန်အင်ဂျင်နီယာနှင့် ခိုင်မာသောနည်းပညာအဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
3. အရည်အသွေးအာမခံချက်- အရည်အသွေးအာမခံချက် 12 လ၊ အရည်အသွေးပြဿနာတစ်ခုခုရှိလျှင်ငွေနုတ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းနိုင်သည်။
1. ကျွန်ုပ်တို့တွင် အမျိုးမျိုးသော data parameters များကိုသိရှိနိုင်ပြီး bearing ၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ပထမတန်းစားစမ်းသပ်ကိရိယာများရှိသည်။ ဝက်ဝံများသည် အရည်အသွေးပြည့်မီခြင်းရှိမရှိကို ဦးစွာသိရှိပြီးတိုင်း အရည်အချင်းမပြည့်မီသော ဝက်ဝံများကို တိုက်ရိုက်ဖယ်ရှားပစ်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖောက်သည်ကြီးများ၏ ယုံကြည်မှုကို ရနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို နှစ်အတော်ကြာအောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့တွင် စံမဟုတ်သော ဝက်ဝံများ၏ ပြဿနာကို ဖောက်သည်များအား ကူညီဖြေရှင်းပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် R&D စွမ်းရည်များရှိပါသည်။ ဖောက်သည်၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကိုလည်း ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
3. သင်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဆင့်တူ အရည်အသွေးရှိသော ဝက်ဝံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးနှုန်းများသည် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။ ပေးသွင်းသူများကြားတွင် ဈေးနှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည် သင့်အတွက် ပိုကောင်းပါသည်။ ဒါပေမယ့် အနိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းနဲ့ အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံး ထုတ်ကုန်တွေကို သင်မ၀ယ်နိုင်ဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် တူညီတဲ့စျေးနှုန်းကို အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ bearing က အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးပါပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဝက်ဝံများ၏ အရည်အသွေးကို အတိအကျ မြင့်မားစေသည့် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် စမ်းသပ်ကိရိယာများဖြင့် အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ကြိတ်ခွဲသည့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့် တပ်ဆင်လိုင်းများ ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝက်ဝံများကို 100% စမ်းသပ်ပြီး ပြုလုပ်ပါသည်။
၎င်း၏သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်နှင့် သတ္တုပုံသဏ္ဍာန်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် bearing rings ၏ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် bearing life ကို မြှင့်တင်ပေးသည့် လှည့်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ထူးခြားသော အအေးခံနည်းပညာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွင်းနှင့် အပြင်လက်စွပ်နှင့် လှောင်အိမ်အတွက် ပျော့ပျောင်းသော နိုက်ထရစ်ဒင်းနည်းပညာသစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝက်ဝံများ၏ ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သက်တမ်းပိုရှည်စေသည်။
ပြည်တွင်းရောင်းချမှုမှလွဲ၍ XRL bearing သည် ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ပါကစ္စတန်၊ အယ်လ်ဂျီးရီးယား၊ ဆော်ဒီအာရေဗျ၊ ရုရှား၊ ယူကရိန်း၊ ကာဇက်စတန်၊ ပီရူး၊ ဘိုလီးဗီးယား၊ ချီလီအပါအဝင် နိုင်ငံနှင့် ဒေသပေါင်း 120 ကျော်သို့ တင်ပို့ပြီးဖြစ်သည်။ ကင်ညာ၊ ဇမ်ဘီယာ၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ မက္ကဆီကို စသည်တို့
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကင်ညာနှင့် ဇမ်ဘီယာကဲ့သို့ တောင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပြီး၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ XRL အမှတ်တံဆိပ်အတွက် အေးဂျင့်ကို ရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်၊ သင်စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။
Linqing Xinri Precision Bearing Co., Ltd. သည် 2006 ခုနှစ်မှ စတင်ကာ မိသားစု အထူးပြု ဝက်ဝံထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေးအခေါ်- ရိုးသားမှုဖြင့် ယုံကြည်မှုရရှိရန်၊ အရည်အသွေးကို အနိုင်ယူပါ၊ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်နှင့် တက်ကြွသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများကို ဖန်တီးလိုက်ပါ။
လိပ်စာ- Yan Dian မြို့ စက်မှုဥယျာဉ်၊ Linqing မြို့၊ Shandong ပြည်နယ်၊